Somali, John: Lesson 104 - Ciise wuxuu dhexdhexaad u yahay midnimada kaniisadda (Yooxanaa 17:20-26) | Waters of Life
Home -- Somali -- John - 104 (Jesus intercedes for the church's unity)
QAYBTA 3 - NASAAJINTA ISKUULKA EE DALKA KOOWAAD (Yooxanaa 11:55 - 17:26)
E - CIISE WALAALAHA (JOHN 17:1-26)
4. Ciise wuxuu dhexdhexaad u yahay midnimada kaniisadda (Yooxanaa 17:20-26)
20 Kuwan oo keliya kuu baryi maayo, waxaanse weliba kuu baryayaa kuwa igu rumaysanaya hadalkooda aawadiis, 21 oo dhammaantood ha wada wadaagaan; sidaad adigu, Aabbow, iigu jirtid, aniguna waan ku jiraa, inay mid ahaadaan sideenna oo kale. in dunidu rumaysato inaad i soo dirtay.
Masiixa wuxuu xertiisa ku muujiyay jacaylka Ilaah iyo awoodda Ruuxa, isaga oo Aabbihiis ka dalbaday inuu ka ilaaliyo Shaydaanka ka hor inta uusan iskutallaabta ku qodbayn. Ka dib markii uu hubsaday in Salaadda oo ka wakiil ah rasuulladiisa iyo kaniisadda ayaa la jawaabay, ayuu u rajeeyay mustaqbalka wuxuuna arkay dad badan oo rumaystayaal ah oo ka soo gudbaya fariinta rasuulladiisa. Sawirka iskutallaabta lagu qodbay Victor oo ku saabsan Shaydaanka iyo dembiga ayaa soo jiitay. Iyadoo ay ku kalsoon yihiin nolosha Masiixa, Ruuxu wuxuu ku soo degi doonaa qalbiyadooda si ay ugu qeyb qaataan nimcada nolosha rabbaaniga ah. Rumaysad ay ku dhex mideeyeen Aabbaha iyo Wiilka ehelnimada weligeed ah.
Masiixa wuxuu u baryay kuwa rumaystayaasha ah oo rumaysan lahaa Rasuullada. Wicidiisii, markii uu tukaday, weli lama helin. Erayadiisu waxay muujinayaan kalsoonida asaasiga ah ee fariinta Rasuulka. Haddaba waa maxay waxa uu rabo dalkiisa? Miyuu ku tukaday caafimaadkeenna? barwaaqadeena, guusha mustaqbalkeena? Maya! Waxa uu waydiistay Aabbihiis inuu na siiyo sharafnimada iyo jacaylka, si aan u noqonno mid la mid ah Masiixiyiin daacad ah. Waa inaanan ka fekereyno inaan ka fiicanahay kuwa kale ama inaan aragno anshaxooda aan la awoodin.
Midnimada Mu'miniintu waa ujeedka Masiixa, kaniisadda kala qaybsata ayaa ka hor imanaysa qorshihiisa. Si kastaba ha ahaatee, midnimadaas oo ah in Masiixa la codsan karo laguma dhisi karo habdhaqameedka, laakiin waa xidhiidh xagga Ruuxa ah oo ku salaysan salaadda iyo Ruuxa oo dhan. Sida Ilaah oo keliya ayaa mid ah, sidaas Masiixa wuxuu ka baryayaa inuu aabihiisa u keeno rumaystayaasha oo dhan si ay u wehesho Ruuxa Quduuska ah, in dhammaantood ay ku suganyihiin isaga. Hase yeeshee, Masiixu ma uusan tukan, "inay noqon karaan mid aniga ama adiga", laakiin "INAGA". Sidaa darteed, waxa uu tusinayaa in middani qumman oo qumman ee udhaxeysa Aabbaha iyo Wiilka ee Ruuxa, uu yahay qaabka. Waxa uu jecel yahay inuu ku sara kiciyo heerkiisa sababtoo ah waxa ka baxsan is weheshiga Trinitarian waxaa jira wax aan ahayn jahannamo.
Ujeedada ah in la aasaaso midnimada Ilaah ma aha inaan nafteena ku farxin, laakiinse waa inaan markhaati ka hor dadka kale ee ka fogaada Ilaah. Waxay rajaynayaan, inay ogaadaan in ay ku dhinteen dembiga iyo sharafta sharafta leh ee addoonta ah iyo addoonada ay u jecel yihiin, oo waxay u baahan yihiin inay toobad keenaan oo u jeestaan Badbaadiyeha. Adiga oo dhirbaaxaya Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah wuxuu heli doonaa xoog si ay u noqdaan kuwa is-hoosaysiiya, jecel, xoriyada ruuxiga ah in la jeclaado qof kasta oo rumaysan; iyagoo faraxsan oo dhadhamiyey farxad iyo farxad Masiixa. Waxaan nahay dhammaan caddaynta ilaahnimada Ciise Masiix. Haddii kaliya Masiixiyiinta oo dhan ay ahaayeen kuwo daacad ah, ma jirto kuwa aan Masiixiyiin ahayn oo ku sii jiri doona adduunka. Jacaylkooda iyo nabadgelyadoodu dhammaantood way soo jiidan karaan, wayna beddeli doonaan. Aan dhawrnayno baahida Ciise oo midaysan! Ma waxaad rabtaa inaad sii wado sabab aadanaha u rumeynin Masiixa, maxaa yeelay waxaad diidday inaad la mid noqoto rumaystayaasha oo aad gacan ka geysato qaybinta kaniisadda, taas oo ah jidhka Masiixa?
22 Ammaantii aad i siisay, inay mid ahaadaan sidaynu mid u nahay. 23 Iyagaan ku jiraa, adna anigaad igu jirtaa, inay mid ku dhan yihiin. in dunidu ay ogaadaan inaad i soo dirtay, iyo inaad iyaga u jeclaatay, sidaad ii jeclaatay.
Waa maxay ammaanta Ciise? Miyuu iftiimayaa iftiinkiisa iyo shuqulladiisa yaabka leh? Maya! Ammaantiisuna way qarsoomi doontaa ka dib markii uu hoos u dhigo, dulqaad iyo naxariis leh. Erey kasta oo ka mid ah hadiyadaha Ruuxu waa riyadiisa ah ee ammaanta. Yooxanaa waa arkay oo marag furay oo yidhi, Waannu aragnay ammaantiisa. Uma jeedin isbedelka ama sarakicistiisa kali ah, laakiin sidoo kale wuxuu ku xidhan yahay khadka dhexe iyo iskutallaabta xun. Kuwaas oo ah ammaanta jacaylka rabbaaniga ah ayaa si muuqata u muuqatay meeshii Wiilku ka furtay sharaf muuqaal ah oo u taagan mabda'a haybaddiisa oo ah qaab nin. Ammaantan Ciise waxa uu na siiyey. Ruuxa Aabbaha iyo wiilkeenu wuxuu inoogu soo degay.
Ujeedada laga leeyahay tani waa mid aan muujineynin iyo is-xayaysiin, laakiin inaanu u soo gudbino midnimada adeega, iyo inaanu la kulanno adeegyo isku dhaf ah oo aan ujeedno in lagu maamuuso kuwa kale. Iyadoo mabaadiida ruuxiga ah Ciise wuxuu waydiistay Aabbihiis isaga oo isku mid ah iyo is weheshi isku mid ah oo tilmaamaya Quduuska Quduuska ah, si aan ugu nadiifino sifooyinkaas. Jacaylka Ilaah waa qiyaasta lagu tijaabinayo kaniisadda. Isagu waa kii caynkee inoogu muujiya sawirka weligiis ah.
Tunta ah, Ilaah wuxuu ku dhex jiraa kaniisadda (Efesos 1:23; Kolosayos 2:9). Ama ma waxaad leedahay kalsoonida inaad ku tiraahdo ereyada ku jirta marxaladan oo kale, "Masiixa buuxsamay ilaahnimadu wuxuu jirku jirku ku jiraa, anna waxaan ku dhameeyaa". Markhaatiga Rasmiga ahi waa caddayn in Ciise ducooyinkiisa ka hor intuusan dhiman. Waannu caabudnaa oo Rabbiga ammaannaa, maxaa yeelay, isagu qaynuunnada waa laguu diidaa, waana adkaaday, qalbiguba waa daahir, mana nijaasoobi doono, oo innaga waa inoogu sii kordhiya inaynu nolol kula qabanno.
Ciise wuxuu kalsooni ku qabay in aanu kaamil noqon karno jacayl iyo is-hoosaysi. Aynu jacaylka iyo sharafkeena. Ma aha mid ka fiican miisaaniyadda, awoodaha, xigmadda, laakiin naxariis iyo jacayl iyo naxariis waa waxa uu inagu rabo. Naxariis iyo dulqaadka ayaa ahaa ulajeedkiisii ugu weynaa markii uu yiri, "Noqo sida ugu fiican ee Aabbihiinna jannadu u qumman yahay." Amarkani wuxuu soo koobayaa dabeecaddiisa si uu u jeclaado cadowga. Laakiin salaadda shactiradiisa waxa uu ujeedkiisu ahaa heer sare oo kaamil ah, midnimada ruuxiga ah ee kaniisadda iyo Ilaah. Ruuxu maaha mid horseed u ah ama ka go'doomin, laakiin wuxuu u wehelinayaa wadaadnimada quduusiinta. Midnimada kalgacal waa nidaamkeenna, mana aynaan metelin aduunka oo dhan haddii aynaan mid nahay. Iyadoo shakhsiyaadka ay qaadeen sawirka Ilaah ee Axdiga Hore, hadana waa in kaniisada ay xubnaheeda muujiyaan sawirka Quduuska ah.
Hada noolaanshaha dhexdeeda ee kaniisadda ayaa ku farxiya adduunka si ay u arkaan inaynu ka soo nimaadno Ilaah. Waxay bilaabaan inay arkaan in Ilaah yahay jacayl. Ma aha kelmado keliya ama sharaxaad dheer oo abuuraya rumaysadkooda. Waa farxad in kiniisadaha carruurta Ilaah ay ka hadlaan wax badan oo ka wacan wacdiyada dheer. Sidoo kale Ruuxa Quduuska ah wuxuu isku daraa Kaniisadda hore ee Yeruusaalem oo ku salaysan midnimada ruuxa.
DUCO: Waad ku mahadsantihiin, Rabbi Ciise, inaga nagu hoggaami, oo aan istaahilin, iimaankaaga. Adigu waxaad ka dhigtay addoommadaada oo dhan markii aannu adigu qabannay. Waannu kuu caabudaynaa, maxaa yeelay, waad nadiifsan tihiin, oo anigana waan qalbiga meeshiisa ku xardhanaa. Naga hor joogso jacaylka Quduuska Quduuska ah. Waxaannu kugu sarreeynaa oo kugu ammaaneynnaa oo waxaan kaa codsanaynaa in aad na siiso awood aan ku noolnahay kaniisadaheena ku jira midnimada iyo nolosha midnimada.
Muxuu Ciise weyddiistay ka Aabbihiis faa'iidadeena?
Page last modified on March 11, 2020, at 11:51 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)